Tsy fahampian'ny rotsak'orana
Mikaikaiky noho ny tsy fahampian'ny rotsak'orana na ny fahataran'izany ny tantsaha amin'ny faritra maro tamin'ity taom-pambolena ity. Tsy ampy ho an'ny fanombohana ny famokarana ny rotsakorana amin'ny fiandohan'ny taom-pahavaratra tamin'ity taom-pambolena 2020 sy 2021 ity...
Ny kalitaon'ny hena...
Miteraka faharatsian'ny kalitaon'ny hena vokarina ny tsy fahalavorarian'ny sakafo omena ny biby fiompy. Mbola ambany ny fampiasàn'ny tantsaha mpiompy ny provandy hanatsaràna ny sakafon'ny biby fiompy mba ahazoana vokatra tsara kalitao...
Mompera Pedro Opeka : 30 taona mahery nanentanana ny olona hiady amin'ny fahantrana, mba hananana fiainana tsaratsara kokoa. 30 taona mahery nahitana fahombiazana, nisedrana fahoriana samihafa, isan'izany ny fiatrehana ny coronavirus saingy toa lalovana fotsiny izany rehefa ny fitiavana ny olona rehetra ho toa ny rahalahy sy anabavy no nanosika hiantsehatra amin'izany. Mitohy ny ezaka fampandrosoana sy ny fandresena ny fahantrana nataon'ny fikambanana AKAMASOA tao anatin'ny 30 taona mahery...